Uncategorized Archives - Page 554 of 562 - Tha Dinn Oo
အဓ္ဓမပြုကျင့်ခံရတဲ့ သမီးလေး Grace အတွက် အစွမ်းကုန် ကူညီပေးနေတဲ့ အေသင်ချိုဆွေ
Posted by hanminhtet — July 4, 2019 in Uncategorized
တကမ္ဘာလုံးက ရှုံချကျတဲ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုတွေကတော့ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း တော်တော်လေးကို များပြားလာပြီး ကလေးလေးတွေအတွက်လည်း စိတ်မချရတော့ပါဘူး။ လတ်တလော အွန်လိုင်းမှာ ပျံ့နှံ့ နေတဲ့ ဗစ်တိုးရီးယားဆိုတဲ့ ကောင်မလေရဲ့ အမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော်တော်များများက တုန်လှုပ်သွားကြသလို နောက်ထပ် သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု ဖြစ်တဲ့ Grace ဆိုတဲ့ ကောင်မလေအမှုကလည်း ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေပေါက်ကံက Grace ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးကတော့ ရမက်သားကောင် တယောက်ရဲ့ အဓ္ဓမကျင့်မှုကို ခံခဲ့ရပြီးနောက် မသေရုံတမယ် ဆေးရုံပေါ်ရောက်ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။…
ဝါရင့်မင်းသမီးတွေ ဖြစ်တဲ့ ချိုပြုံးနဲ့ မိုမို့မြင့်အောင်ကို ဒဲ့ဝေဖန်သွားတဲ့ အလှမယ်သင်းသင်း
ပရဟိတ မင်းသားကြီး အဖြစ်ပရိသတ်တွေ သိထားတဲ့သရုပ်ဆောင် ဝေဠုကျော်ကို မော်ဒယ် သင်းသင်းက ကာမလိမ်လည် ရယူခဲ့သည်ဟုဆိုကာ တရားစွဲဆိုထားတဲ့ အမှုကိုတော့ ဇူလိုင်လ (၃) ရက်နေ့က ရန်ကုန် ၊ သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ် တရားရုံးမှာ ဆက်လက်စစ်ဆေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုံးချိန်းကို တက်ရောက်လာတဲ့ တရားလို သင်းသင်းက မီဒီယာတွေနဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ခံစားချက်တွေကို ပေါက်ကွဲခဲ့သလို သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ ချိုပြုံးနဲ့ မို့မို့မြင့်အောင် တို့ကိုလည်း သတိပေးစကား ပြောခဲ့ပါတယ်။ သင်းသင်းတယောက်ကတော့ တကယ့်ကို ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီး…
နိုင်ငံသား တိုင်း မဖြစ် မနေ သိ ကိုသိထား ရမယ့် မြေအရောင်းအဝယ် စာချုပ်ချုပ်ဆိုပုံ အဆင့်ဆင့်
“မြေ”….အဆော က်အအုံ ဆိုတာ အရွယ်အစား အမျိုးမျိုး ရှိကြသည့် အတိုင်း မည်ကဲ့သို့သော အဆောက်အအုံကို ဆောက်လုပ်မည်ဖြစ်စေ အခြေခံ အကျဆုံး လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ မြေကွက်လပ် ရှိမှသာ ဆောက်လုပ်လို့ ရနိုင်မည် မဟုတ်ပါ လား၊ ကိုယ်ပိုင် မြေကွက် ရှိပြီးသူများအဖို့ မိမိပိုင်ဆိုင်သော မြေကွက်ပေါ်တွင် အရှုပ်အရှင်း ကင်းစွာဖြင့် မိမိစိတ်တိုင်းကျ ဆောက်လုပ်နေထိုင်ခြင်း၊ လွပ်လပ်စွာ ရောင်းဝယ်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်း မြေကွက်ဝယ်ယူ၍ ဆောက်လုပ် နေထိုင်မည့်သူ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့်သူများကတော့ စိတ်ချယုံကြည်မှု ရှိစေရန်အတွက် ပိုင်ဆိုင်မှု…
လပွတ္တာမြို့နယ်မှ အသက် ၁၄ နှစ်​အရွယ်​ မိန်းက​လေးငယ် ပ​ထွေးနှင့်​ခယ်​အိုတို့၏ အဓမ္မပြုကျင့်​ခံရ
ဇူလိုင်​(၃)၊ပုသိမ်​။ ဧရာဝတီတိုင်း၊ လပွတ္တာမြို့နယ်၊ ညောင်လိန်ကျေးရွာ အုပ်စု အတွင်း အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးကို ပထွေးဖြစ်သူနှင့် ခယ်အိုဖြစ်သူတို့မှ အဓမ္မပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ ကြောင်း သတင်းရသည်။ ပြုကျင့်ခံရသူ မိန်းကလေး နေမကောင်းဖြစ်၍ မိသားစုဝင် များနှင့်အတူ ဆေးခန်းသွားရောက်ပြသစဉ် ကိုယ်ဝန် ၃ လ ခန့်ရှိနေသည်ကိုသိရှိခဲ့ပြီး ဇူလိုင်လ ၂ ရက်နေ့ (ဆေးခန်းပြသည့်နေ့)တွင် ရဲစခန်းသို့လာရောက်တိုင်တန်းကြောင်း တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သိရသည်။ ” အသက်က ၁၄ နှစ် ဆိုတော့…
“လှိုင် သာယာမြို့နယ် ကို အုပ်ချုပ် စီမံရတာ ခက်ခဲေ နတယ်လို့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းပြော”
လှိုင် သာယာမြို့နယ်ဟာ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အတွက် အခဲအခက်ဖြစ်နေတယ်လို့ ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရုံးမှာ ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာ ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ကို အခြားမြို့နယ်ထဲ ပေါင်းထည့်မထည့် မီဒီယာတွေရဲ့မေးမြန်းမှုကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လှိုင်သာယာမြို့နယ်ဟာ သိပ်ကိုကြီးမားနေပြီး အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ လူဦးရေဟာ ကယားပြည်နယ်က လူဦးရေထက်များပြားနေပြီး လူဦးရေတိုးပွားနေတာကြောင့် အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲရတာ ခက်ခဲနေတယ်လို့ ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကပြောပါတယ်။ “ဒီအတွက် လှိုင်သာယာကို ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားနေပါတယ်။”လို့ ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကပြောပါတယ်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်သန်းခေါင်းစာရင်းတွေအရ လှိုင်သာယာ မြို့နယ်မှာလူဦးရေ ၇ သိန်းကျော်နေထိုင်ကြပြီး…
“ကျား ဆို ရင်အကု န် ဘယ်သူ့မှ မယုံကြပါနဲ့တော့ ကာယကံရှင်မိဘတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ သိရှိရအောင်လို့တင်ပေးပါတယ်”
သနားလိုက်တာဒေါသလဲထွက်တယ် ကျားဆိုရင်အဖေအဖိုးဦးလေး ဆွေမျိူးရင်း ဝမ်းကွဲအကုန်မယုံကြပါနဲ့တော့ Stop Childဆက်စ် Abuse(ကာယကံရှင်မိဘတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့သိရှိရအောင်လို့တင်ပေးပါတယ်) Kallanပြောချင်တာအခုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့abuseခံရတဲ့(လောလောလတ်လတ်ကြီးကိုယ့်မျက်စိရှေ့တင်ဖြစ်ပြီးကိုယ့်နားကကလေးတယောက်)အကြောင်းပြောချင်ပါတယ် Kallanကအိမ်မှာမူကြိုအရွယ်ကလေးတွေကိုEnglishစကားအသုံးနှုန်းနဲ့စကားလုံးတွေပိုပြီးသိလာအောင်သင်တန်းလိုမျိုးလေးတစ်ခုဖွင့်ပါတယ်…ရင်းနှီးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အသိမိတ်ဆွေတွေရဲ့ကလေးလေးတွေလာတက်ကြပါတယ်..ကလေးလေး၅ယောက်ကိုစာသင်နေရတဲ့ဆရာမပေါက်စနလေးပါ… Kallanကတစ်ပတ်ကို၎ရက်သင်တာဖြစ်ပြီး၎ရက်ထဲက၁ရက်ကတော့ရင်ဖွင့်ချိန်လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ရက်ပါ…Sundayတိုင်းကရင်ဖွင့်ချိန်လို့နာမည်ပေးထားပြီးတချို့လေးတွေကလည်းစာမသင်တော့မလာဘူး..တချို့ကျတော့လည်းအိမ်ကထိန်းမနိုင်ဘူးဆရာမရေ..သွားမယ်လို့ပြောနေလို့လွှတ်လိုက်ရတယ်ဆိုပြီးလာပါတယ် အဓိကကအခုမှစတာပါ…ရင်ဖွင့်ချိန်ကိုတစ်ခါမှမလာဖူးတဲ့ကျောင်းသူလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်…English classမို့လို့သူ့ကိုပေးထားတဲ့Englishနာမည်ကိုမရေးတော့ပါဘူး..အသိထဲကတွေ့သွားရင်ဘယ်သူလဲသိနေမှာစိုးလို့ပါ…roseလေးလို့ပဲခေါ်မယ်နော်…roseလေးကဆံပင်အရမ်းကောင်းတယ် ဗိုက်လေးပူပူ မျက်လုံးလေးလည်းအရမ်းလှတာမို့တွေ့တဲ့သူတိုင်းကပါးလေးဆွဲ ဆံပင်လေးပွတ် ပခုံးလေးကိုင်လုပ်ကြပါတယ် မြင်လိုက်တိုင်းပြန်မလှည့်ကြည့်ပဲမနေနိုင်လောက်အောင်သွက်လက်ပြီးချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့လိမ္မာတဲ့ကလေးပါ..အဲ့ကလေးကဒီအပတ်ရင်ဖွင့်ချိန်ကိုလာပါတယ် သူကKallanကိုမေးတာရင်ဖွင့်ချိန်ဆိုတာအကုန်ပြောလို့ရတာလားတဲ့…Kallanကရတယ်လို့ပြောတော့သူပြောတာတစ်ခုထဲပါ(ကန်တော့ပါရဲ့)..သမီးပုံပုံကနာတယ်….ဦးဦးနဲ့သူ့သူငယ်ချင်းကနာအောင်လုပ်တာ…ဘယ်သူမှမပြောရင်နေ့တိုင်းမုန့်ဝယ်ကျွေးမယ်…သွားပြောလို့ရှိရင်နင့်ရဲ့ငါးလေးတွေကိုသတ်ပလိုက်မယ် ဒါဆိုနင့်ငါးလေးတွေကိုတသက်လုံးတွေ့လို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်..မီးမီးငါးလေးတွေကိုသူတို့မသတ်ပဲနဲ့မားမားကိုပြောလို့ရမဲ့နည်းရှိဘူးလားဟင်တဲ့ ကိုယ်ကရတာပေါ့…ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာကိုသေချာလေးပြောပြနော်ဆိုတော့သူပြောပြတာကshockရစေပါတယ်..ဘာလို့ဆိုကလေးကဆက်စ်abuseလုပ်ခံနေရတာ၁နှစ်ကျော်ပါပြီ(ကလေးကအခုအသက်၎နှစ်ပါ)သူ့တို့မိသားစုကအမေ၊အဖေ၊ကလေးနဲ့ကလေးရဲ့ဦးလေး(အဖေ့ညီ)လူပျိုကြီးနဲ့၎ယောက်တအိမ်ထဲနေကြတာပါ…ကလေးရဲ့ဦးလေးကအခုဆိုရင်၃၀နီးပါးရှိပါပြီ…roseလေးကတဦးတည်းသောကလေးမို့လို့သူ့အိမ်ကမွေးထားတဲ့ငါးလေးတွေကိုညီမလေးမောင်လေးခေါ်ပြီးသိပ်ချစ်ရှာတဲ့ကလေးလေးပါ ကလေးပြောပုံအရဆိုရင်မနက်အဖေအလုပ်သွားပြီးအမေကနောက်ဖေးမှာအလုပ်ရှုပ်နေရင်ကလေးကိုသူ့ဦးလေးကထိန်းပေးရပါတယ်…အဲ့အခါကျရင်ကလေးကိုသူ့အခန်းထဲခေါ်သွားပြီးနမ်းတယ် ကလေးရဲ့မအဂါင်္ကိုပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်ပြီးကစားတယ် ကလေးတင်ပါးကိုဖျစ်ညစ်ပြီးကိုင်တယ်တဲ့ အစကတော့ဘာလုပ်နေမှန်းလည်းကလေးမသိပေမဲ့မေမေ့ကိုပြောရင်မေမေကတူတူမကစားခိုင်းတော့ဘူး အဲ့ဒါဆိုရင်ဦးဦးကကလေးနဲ့မတွေ့ရဘူး မတွေ့ရရင်မုန့်တွေအရုပ်တွေဝယ်ပေးလို့မရတော့ဘူးပြောလို့ကလေးကမပြောခဲ့ပါဘူးတဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့၂ရက်ကတော့အဖေကအလုပ်သွား အမေကအပြင်သွားတဲ့အချိန်ဦးဦးနဲ့သူ့သူငယ်ချင်းကroseလေးကိုခေါ်ပြီးပုံမှန်လိုပဲနမ်းကိုင်ကစားရာကနေဦးဦးသူငယ်ချင်းကမီးမီးအဂါင်္ကိုလက်ချောင်ထိုးသွင်းပါတယ်တဲ့ မီးမီးကနာလို့ငိုပြီးမေမေနဲ့တိုင်မယ်ပြောတော့နင့်ငါးလေးတွေကိုသတ်ပစ်မယ်ပြောတယ်တဲ့ မပြောပဲနဲ့ပါးစပ်ပိတ်နေရင်အရင်လိုပဲမုန့်တွေအရုပ်တွေဝယ်ပေးမှာလို့ပြောတယ် အဲ့ဒါကြောင့်ပါးစပ်ပိတ်နေပြောပြီးဦးဦးရောသူ့သူငယ်ချင်းရောမီးမီးပုံပုံကိုလက်ချောင်းကြီးတွေထိုးတယ် နင်မသိရင်မှတ်ထား ကြီးလာရင်လည်းအဲ့နေရာကအချောင်းထိုးသွင်းရမဲ့နေရာလို့ပြောတယ် မီးမီးအော်ငိုတာကိုဦးဦးကသူ့လက်ကြီးနဲ့ပိတ်တယ်လို့ပြောပြီးကလေးကချက်ချင်းငိုချပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ဖေဖေကအပြင်သွားမယ် မေမေလည်းလိုက်သွားမယ် ဦးဦးနဲ့နေခဲ့ပြောလို့မနေရဲလို့ကြောက်ပြီးဒီကိုပို့ပေးဖို့ပြောလာတာ သူအိမ်မပြန်ချင်ပါဘူး အိမ်မပြန်ရဲပါဘူးတဲ့လေ…
အသည်းကွဲ လို့ LIVE လွှင့် ငို ယိုပြီး၊… SHAMPOO တွေေ သာက်ပြတဲ့ေ..ကာင်မလေး၊ နာမည်ကြီးနေ
မေ လး ရှားနိုင်ငံ ကလို့ ယူဆရတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကတော့ သူမရဲ့ကောင်လေးက ထားသွားတာကို အကြောင်းပြုပြီး Live လွှင့်ကာ ငိုယိုခဲ့ပါတယ်။ ယင်းနောက် ကောင်မလေးဟာ ခေါင်းလျှော်ရှည်တွေကို ဖျော်ရည်အလား စိတ်မှာထားပြီး၊ အားရပါးရ သောက်ပြတာပါ။ ကောင်မလေးရဲ့နာမည်ကိုတော့ မသိရပါဘူး။ ဒီဗွီဒိယိုကို Viralkan Ajer အမည်ရ Page က တင်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီပို့စ်ဟာ မကြာမီမှာ Facebook က ဖျက်ချလိုက်လို့၊ ဓာတ်ပုံ SS တွေနဲ့…
မြန် မာ ပြည် သူ အား လုးံအတွက် အရေးကြီးသတင်း
Posted by hanminhtet — July 3, 2019 in Uncategorized
Tweet2–7– 2019 ***မြန် မာ ပြည်သူ အားလုးံအတွက် အရေးကြီးသတင်း*** အေ ရးကြီးသတင်း !! Red Alert Warning !! အများသိအောင် ရှယ်ပေးကြပါ။ သတိထားကြပါ။ မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေး အရေးပေါ်အခြေအနေ ရောက်ရှိလာပါပြီ။ အစိုးရအနေနဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးတွေ လုပ်ဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ။ အခု အခြေအနေဟာ ရာသီတုပ်ကွေး မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ပထမဆုံး စတင်တွေ့ရှိခဲ့တာက H1N1 ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ပြီး…
အ သက် ၁၁၉ နှစ်ပြည့်တော့ မည့် ..ကချင်ပြည်နယ် ခေါင်လံဖူးမြို့နယ်… ဖမ်တုံရွာမှ ဦးဆမ်ဘုံဒီး ဖြစ်ပါတယ်
အ သ က် ၁၁၉ နှစ်ပြည့်တော့မည့် ကချင်ပြည်နယ် ခေါင်လံဖူးမြို့နယ် ဖမ်တုံရွာမှ ဦးဆမ်ဘုံဒီး ဖြစ်ပါတယ်။ က ချင်ပြည်နယ် ခေါင်လံဖူးမြို့နယ် ဖမ်တုံရွာမှ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၁/ခဖဒ(နိုင်)၀၀၈၉၁၁ ကိုင်ဆောင်သော ရဝမ်လူမျိူး ဦးဆမ်ဘုံဒီး၏ အိမ်ထောင်စု၌ ဖော်ပြချက်အရ ၎င်း၏ မွေးသက္ကရာဇ် မှာ(၁၃.၆.၁၈၉၇) ဖြစ်ပြီး ယခုလာမည့် ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် အသက် ၁၁၉ နှစ် ပြည့်တော့မည်ဖြစ်သည်။ ဦး ဆမ် ဘုံ ဒီးသည်…
Wisdom Hill ကျောင်း က ကလေး ငယ်ကိ စ္စ အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေး အမြန်လုပ်ဆောင်ရန် သမ္မတဟောင်းရဲ့ ဇနီးတိုက်တွန်း
နေပြည်တော် မှာရှိ တဲ့ Wisdom Hill ကျောင်း မှာ အသက် ၃ နှစ်ခန့်အရွယ် ကလေးငယ်တဦး မဖွယ်မရာပြုကျင့်ခံခဲ့ရတဲ့ အမှုကို တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ ဥပဒေဘောင် အတွင်းကနေ အမြန်ဆုံး အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့ ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတ (ငြိ်မ်း) ဦးထင်ကျော်ရဲ့ ဇနီးဒေါ်စုစုလွင်က တိုက်တွန်းပြောပါတယ်။ “အမှုမှန်ပေါ်ဖို့က ဖြစ်လာနိုင်ဖို့ကတော့ ကြိုးစားရမှာပေါ့။ တာဝန်ရှိတဲ့ သူတွေနဲ့ ဒီဥစ္စာကို တစိုက်မတ်မတ်နဲ့ တိတိကျကျ စနစ်တကျနဲ့ လုပ်ဖို့ကတော့ ကျမပြောမှ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတိုင်း သိတဲ့…